सेल्टल्ट: एक्सटेन्सनसँग वेब डेटा एक्सटेन्सन
आधुनिक प्रविधिहरु संग निर्मित उच्च संचालित वेबसाइटहरु बाट जानकारी निकालन जस्तै जाभास्क्रिप्ट कहिल्यै सजिलो भएको छैन। वेब स्क्रैपिंगले एप्लिकेसन प्रोग्रामिंग इन्टरफेस (API) को परिभाषित नगरी डाटा को ठूलो मात्रा को निकासी गर्दछ।
शुरुवातका लागि, वेब स्क्रैपिंग टेक्नोलोजी प्रायः वेब पृष्ठहरू र साइटहरूमा असुरक्षित र अर्ध-संरचित डेटा निकाल्ने संरचित डाटामा जुन पछि एक्सेल स्प्रिडशिट र डाटाबेसमा भण्डार गरिएको छ। आजकल, स्क्रैपिंग एक-यो-आफैलाई कार्य हो, Google को लागी धन्यवाद। वेब स्क्रैपर एक्सटेन्सनको साथ, वेब स्क्रैपिंग एक क्लिक टाढा हो।
असंगत डेटा अधिकतर एचटीएमएल ढाँचामा उपलब्ध छ। साधारण फारामहरूमा साइटहरूबाट डेटा पुन: प्राप्त गर्न, तपाईंले केहि स्क्रैपिंग गर्न पाउनु हुन्छ। यदि कोडिंग तपाईंको रुचि छैन भने, वेब स्क्रैपर एक्स्टेन्शन तपाईंको वेब डाटा निकासी आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न डिजाइन गरिएको छ।
(1 9) अनलाइन मूल्य तुलना
वेब स्क्रैपर एक्सटेन्सन अनलाइन तस्वीरहरु बाट छवियों, उत्पाद को मूल्यहरु र विवरण को रूप मा उपयोगी जानकारी निकाल्छ। जानकारी ई-व्यवसाय मालिकहरूले मूल्य तुलना र डेटा विश्लेषणको लागि प्रयोग गरीएको छ। स्क्रैपिंग पनि व्यापक रूपमा अनलाइन ट्रेवल एजेन्सीहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। वेब स्क्रैपर एक्सटेन्सनको साथ, तपाईं सजिलै संग छविहरु र उत्पादन को मूल्यहरु लाई धेरै साइटहरु बाट निकालन गर्न सक्छन् र डेटा विश्लेषण को डेटा डेटासेट मा भण्डारण गर्न सक्छन्।
(1 9) अनलाइन प्रतिष्ठा को प्रबंधन
अनलाइन मार्केटिङको संसारमा, तपाईंको अनलाइन स्थिति कोयम राख्नु आवश्यक छ तपाईंको मार्केटिङ रणनीतिहरू पुन: परिमार्जन गर्नुहोस्। यो जहाँ धेरै ई-व्यवसायहरू गलत छन्। अनलाइन अनलाइन प्रतिष्ठान व्यवस्थापनमा नगद अप्ठ्यारो छ। वेब स्क्रैपिंगको साथ, तपाईं ट्रान्सिङ मुद्दाहरू, ग्राहकहरूको राय र जनसांख्यिकीय तथ्याङ्कहरूमा उपयोगी डेटा निकाल्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको एक्सेल पानाहरूमा यो प्रकारको डेटाको साथ, तपाईं क्षेत्रहरूमा निर्णय गर्नका लागि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ब्रान्ड लोकप्रियता र वास्तविक समयमा प्रतिष्ठाको क्षति रोक्न।
(1 9) वेबसाइट परिवर्तन र स्पाम समीक्षाहरू पत्ता लगाउने
वेबसाइट-लेआउटहरू रातभर परिवर्तन गर्दछ। यो आवश्यक छ कि वास्तविक समयमा लेआउट परिवर्तनहरू ध्यान दिनुहोस् र प्रभावकारी रणनीतिहरू लागू गर्न आवश्यक छ। उपयोगी डेटा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो वेब कणर विस्तार हुन्छ। यस ब्राउजर एक्सटेन्सनको साथ, तपाईं आफ्नो संभावित प्रयोगकर्ताहरूलाई भ्रामक गर्न वेबसाइट वेबसाइट परिवर्तनहरू र धोकाधीन समीक्षाहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
(1 9) किन वेब स्क्रैर?
वेब स्क्रैपर एक शीर्ष श्रेणीबद्ध ब्रान्ड हो wser plugin जसले डेटा निष्कर्षण सेवा र निःशुल्कको लागि Google क्रोम एक्सटेन्सन प्रदान गर्दछ। वेब स्क्रैपर द्वारा निकालिएको डेटा CSV फाइल ढाँचामा डाउनलोड गरिएको छ र पछि सोचडीबीमा भण्डार गरिएको छ। वेब स्क्रैपिंग गतिविधिहरु जस्तै डाटा निष्कर्षण, निर्यात, र साइटमैप इमारत क्रोम ब्राउजर भित्र आयोजित गरिन्छ।
(1 9) वेब स्क्रैपर एक्सटेन्सन के हो?
वेब स्क्रैपर एक वेब साइट मा निःशुल्क को लागी प्रदान गरिएको एक प्लगइन वा एक्सटेन्सन हो। यो एक्सटेन्सनको साथ, तपाईं उच्च-संचालित वेब पृष्ठबाट उपयोगी डेटा निकाल्न सक्नुहुनेछ। वेब स्क्रैपर एक्सटेन्सन प्रयोग गरेर डाटा CSV फाइल वा सोचडीबीमा भण्डारण गर्न सकिन्छ। यो एक्स्टेन्सन शब्द साइटबाट साइटमैप भित्र काम गर्दछ। एक प्रयोगकर्ताको रूपमा, तपाईंले निर्णय गर्न के गर्ने निकाल्नु भएको छ र के पछि छोड्नु हुन्छ।
वेब स्क्रैपर स्थापना गर्न, Google वेब स्टोरमा जानुहोस् र क्रोममा विस्तार थप गर्नुहोस्। वेब स्क्रैपर एक्सटेन्सनले तपाईंको लागि स्क्रैपिंग गर्न दिनुहोस्। यो प्लगइन नेभिगेट र अन्तिम प्रयोगकर्ता द्वारा साइटमैप निर्माण अनुसार डेटा निकाल्छ।